> Resource > Video > Sida loo Beddelaan M4V in MKV
Diinta videos ama ka videos for Raaxo kama dambaysta ah waa in aanay noqon raaxo ah, laakiin lagama maarmaan. In this article, aan dabooli doonaa si fudud oo dhaqso diinta M4V in MKV video.
Guud ahaan, diinta M4V in MKV, waxaad ka heli kartaa waayo-aragnimo fiican u ciyaaro on PC, HDTV, ama ku raaxaysan loo maqli dabacsan oo ku saabsan qalabka taageera MKV ahayn M4V. Haddii aadan fahmin wax Deji ama kelmadaha farsamooyinka, diinta videos noqon kartaa shaqada sayniska. Nasiib wanaag, waxaa nahay dad badan converters video ka dhacay suuqa si wax loogu qabto baahidaada. Oo halkan Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) si weyn lagu talinayaa ay sabab u tahay tayo sare leh, hufnaan, iyo feature halleeyo lillaahinimada. Sidaa daraadeed, diinta M4V videos ama ka qaab kasta oo uu yahay oo kaliya fud aad u. Hadda aynu ku dhex socdo geeddi-socodka faahfaahsan, talaabooyin fudud oo kaliya 3.
Download Free version jirrabaadda kuwa aan M4V in MKV Video Converter:
1 Load M4V files si M4V in ay MKV video Converter
Si aad u dajiyaan files M4V barnaamijka, waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa oo iyaga hoos u Converter ah, ama madaxa si "Beddelaan" tab ka dibna dooro "Add Files" in lagu daro aad files M4V. Diinta Dufcaddii waxaa taageera si aad u dajiyaan karaa in ka badan hal file warbaahinta barnaamijka diinta.
2 Dooro MKV sida qaab wax soo saarka
Si aad u dhigay qaab wax soo saarka sida MKV, halkan waxaad ka furan kartaa "Qaabka Output" liiska qaab ka dibna dooran "MKV" banaan "Qaabka"> "Video". Fiiro gaar ah: haddii aad video asalka waa saamayn HD, waxa kale oo aad dooran kartaa "Qaabka"> "HD"> "HD MKV".
3 Start M4V in ay diinta ka MKV
Si ka furmkidoona diinta, kaliya ku dhacay "Beddelaan" button oo ha video Converter taas loo sameeyo inteeda kale. Waa mid aad u hufan iyo bar horumarka waqtiga inta hadhay ku tusi doonaa. Ka dib markii ay diinta ka dhamaystay, aad ku raaxaysan karaan shaashada ballaaran iyo image af HDTV ama ciyaartoyda MKV aad on go ah.
Beegyada uu u maqal ah ama video waa xor ah u hagaajin aad waayo-aragnimo dheeraad ah oo loo maqli karo raaxo, riix "Settings" doorasho si ay u helaan suuqa kala goobta, waxaad sameyn kartaa heerka xoogaa ah, heerka jir ah, xallinta, channel, iwm Dhanka kale, video Converter this sidoo kale waxay bixisaa hawlaha tafatirka caadi ah, oo ay ku jiraan abuurka, falinjeeerka, saamayn, watermark, iwm Wixii faahfaahin dheeraad ah, pleaser tixraac User Guide in Windows .
Iyada oo barnaamijkan, waxaad awood karaa subtitles fur-in aad videos M4V haddii ay lagama maarmaan ah. Wixii faahfaahin ah, fadlan eeg Sida loo dar subtitles in Movie ah .
Badan oo ku saabsan M4V iyo MKV Baro:
M4V waa qaab caadi ah file ee aaladaha Apple iPod oo caan ah. Marka aad soo iibsato ama download ka filimada, bandhigyada TV ama videos music ka Lugood, waxaad ka heli doontaa in ay had iyo jeer qaado fidinta file .M4V iyo ilaaliyo Apple ee FairPlay Pocliy. Waqtigan xaadirka ah, faylasha M4V iibsaday taageeri kartaa oo kaliya loo maqli on Lugood iyo qalab macruufka ah sida iPod, iPhone, iPad la oggolaansho.
MKV, u furan qaab caadiga ah weel multimedia, qaban karaan tiro aan xad lahayn of audio, video, sawirka ama kuwan raadkaygay Cinwaan in mid ka mid ah faylka. Waxa ay u shaqaynaysaa sidii qaab guud oo loo kaydiyo content multimedia caadi ah, sida filimada ama ay muujinayso TV. Haddaba waad arki waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in HD videos, iyo si fudud u noqon kartaa barta in ka badan internet-ka ay sabab u tahay baaxadda file yar.
Download Free hoos ku M4V in Converter MKV:
Sida loo Beddelaan M4V in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo Beddelaan FLV in DV
Sida loo Beddelaan MKV in TS la High-xawaaraha iyo tayo wanaagsan leh